↑ Constitution of the Republic of Armenia - Library - The President of the Republic of Armenia။4April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Armenia may be considered to be in Asia and/or Europe. The UN classification of world regions places Armenia in Western Asia; the Central Intelligence Agency The World Factbook Armenia။ The World Factbook။ CIA။ 19 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 2, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Armenia။ National Geographic။ and Armenia။ Encyclopædia Britannica။ also place Armenia in Asia. Conversely, some sources place Armenia in Europe such as Oxford Reference Online Homepage။ Oxford Reference Online။ September 2, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ and Europe။ Worldatlas။ September 2, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာမေးနီးယားနိုင်ငံ&oldid=740152" မှ ရယူရန်
အာမေးနီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။